Xiriirka kubadda Koleyga oo Tababarka tababarayasha kubada Koleyga 60 macallin uga furay Muqdisho+Sawirro
Thursday, January 24th, 2019 - 09:08:52
Wednesday December 27, 2017 - 13:19:11 in Wararka by Hussein Hadafow
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Koleyga ayaa 17 degmo ee gobolka Banaadir bilaabaay tababar lagu soo saarayo macallimiin ay degmooyinka gobolka Banaadir yeeshaan.
Xaflada tababarka oo lagu qabtay xarunta degmada Shiib waxaa kasoo Gudoomiye Kuxigeenka Arimaha Bulshada Cabdulaahi Xaaji Cilmi Ereg, guddoomiyaha XSKK Cabdullahi Nuur Maxamed Cadaani, Guddoomiyaha Isboortiga gobolka Banaadir Xasan Wiish iyo macallimiinta tababarkan bixinaya.
Guddoomiyaha arimaha bulshada Cabdullaahi Xaaji Cilmi Ereg oo xaflada ka hadlay ayaa sheegay in Gobolka Banaadir ay ka go’an tahay horumarinta kubadda Koleyga 17 degmo ee gobolka Banaadirna laga doonayo in ay u diyaargoroobay Horumarinta kubada Koleyga.
Erag ayaa dhanka kale tilmaaamay in maamulka Gobolka aysan ogolaan doonin xarumaha degmooyinka ee garoomada kubadda Koleyga loogu talo galay lagu ciyaaro ciyaaraha futsalka.
Guddoomiyaha Xiriirka kubada Koleyga Soomaaliya Cabdullaahi Nuur Maxamed Cadaani oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in gobolka Banaadir ay uga mahad celinayaan sida wanaagsan uu xiriirka uga cawinayo horumarinta kubada Koleyga, waxuuna intaa kudaray in xiriirka ay ka go’an tahay in gobolka kasta iyo degmo kasta oo dalka ay gaareen intii awoodi karaan si horumarka ubadad koleyga looga dhaqan geliyo.
Guddoomiye Cadaani ayaa intaa ku daray in macallimiinta la tababaryo laga doonayo in ay wax soo saar wanaagsan ka sameeyeen degmooyinka ay wakiilada ka yihiin iyo iskuulada ku yaala, waxuuna u ballan qaaday in xiriirka uu qaban doono tababare kale oo macallimiin dalka dibadiisa looga keenayo si ay sare logu qado aqontooda lana gaarsiiyo heerka ugu sareysa ee macallinimo.
Tababarkan ayaa socon doona muddo bil ah waxaana ka qeyb galaya 51 macallin oo ka socda degmooyinka Gobolka Banaadir iyo 9 ciyaaryahan oo xirfada macallinimo la barayo.
Tababaran ayaa qeyb ka ah tababarada joogtada uu xiriirka kubada koleyga kusoo nooleeyoo ciyarihii Iskuulada, jaamacada iyo kuwa degmooyinka oo gaabis kujiray sanadihii u dambeeyay.